အခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများသင်ခန်းစာ - အခမဲ့ဗီဒီယို
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအခန်းအပူချိန် (၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) သို့ယူဆောင်လာရန်အချိန်ယူခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီခြေလှမ်းကိုကျော်ဖို့သင်သွေးဆောင်ခံရနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ ဤရွေ့ကားလျင်မြန်စွာအခန်းအပူချိန်သို့ပါဝင်ပစ္စည်းများဆောင်ခဲ့အဘို့အကြှနျုပျ၏အကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။
သင်သည်ငါ၏ချက်ပြုတ်နည်းများ (သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ) ကိုမဆိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သင်လိုအပ်တာကိုသင်ဖတ်ဖူးပေမည် အခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ။ များသောအားဖြင့်ကြက်ဥ၊ ထောပတ်နှင့်နို့ကဲ့သို့သောအရာများသာမကချဉ်သောမုန့်၊
ပါဝင်မှုအားလုံးဤပူနွေးလာမှုနောက်ကွယ်မှအကြောင်းပြချက်? Creating an emulsion ။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့် (ရေနံနှင့်ရေကဲ့သို့) အတူတကွရောနှောခြင်းနှင့်သူတို့ကိုရောနှောနေဖို့ရတဲ့မနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်သောအခါ, သင်တစ် ဦး emulsion ဖန်တီးပါတယ်။
Mayonnaise သည်ရိုးရိုး emulsion ၏ကောင်းမွန်သောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြက်ဥအနှစ်နှင့်ဆီကိုခက်ရင်းခွနှင့်အတူရောနှောပါကထိုဆီသည်ဥမှသီးခြားခွဲလိမ့်မည်။ အဆက်မပြတ်တုန်ခါနေစဉ်ဆီဖြည်းဖြည်းထည့်လျှင်၊ ဆီနှင့်ကြက်ဥအနှစ်တို့သည်အသစ်သောအရောအနှောဖြစ်လာပြီး၎င်းသည်ကွဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါက emulsion ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများအပူချိန်ကွဲပြားခြားနားသောအခါ, သူတို့သည်ရောနှောကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတူညီသောအပူချိန်သို့ယူဆောင်လာခြင်းကသူတို့ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်ကူညီသည်။ ချက်ပြုတ်နည်းများသည်မကြာခဏဆိုသလို“ အခန်းအပူချိန်” ဟုပြောရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာစာထဲတွင်ပါဝင်သောအရာအများစုသည်အအေးခန်းမဟုတ်လျှင်အခန်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။
သင်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအခန်းအပူချိန်သို့မပို့ဆောင်ပါကသင်၏နှင်းခဲ၊ မညီမညာဖြစ်နေသောမုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ပြားချပ်ချပ်ကိတ်မုန့်များနှင့်ထောပတ်သီးအခွံများတွင်အအေးအပိုင်းအစများဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သင်အစဉ်အဆက်အအေးပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုပါက အသီးလျှော့ချရေး ဒါမှမဟုတ် ထောပတ် buttercream ဖြင့်သင်နှစ် ဦး သည်ကောင်းစွာရောနှောခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။
သို့သော်သင်သည်အသီးအနည်းငယ်ကိုနွေးပြီးနောက် buttercream နှင့်ရောစပ်လိုက်လျှင်ရုတ်တရက်အားလုံးအတူတူဖြစ်လာသည်။
သင်၏စာရွက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အပူချိန်အတူတူပင်ဖြစ်သည့်အခါသူတို့သည်ပိုကောင်းလာသည်။ ကိတ်မုန့်ရိုက်နှက်သူများကိုချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်လေထုကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေနေကြသည်။ ကိတ်မုန့် နှင့် မင်္ဂလာပါ ပိုကောင်းတဲ့ထနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ texture ရှိသည်။
တစ်ခါတလေငါ့၌ နယူးကိတ်မုန့် မုန့်ပြားဖုတ်သည့်အုပ်စုသည်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အောက်ခြေတွင်အဆီပြန်စိုစွတ်သောအလွှာရှိသောကိတ်မုန့်၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတင်ပြီးဘာအမှားလဲမေးသည်။ အကြောင်းပြချက်၏အချိန် 99% သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများတ ဦး တည်းအခန်းအပူချိန်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ကြက်ဥ။ ဤသည်မုန့်ဖုတ်နေစဉ် Battery ကို curdle နှင့်ကွဲစေ၏။ ဆီသည်အောက်ခြေတွင်အခြေချသည်။ ကိတ်မုန့်သည်ကြမ်းတမ်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအလွန်ကောင်းသည်မဟုတ်။
များသောအားဖြင့်သင်အသုံးမပြုခင်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အခန်းအပူချိန်သို့အအေးမိသည့်အရာများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ သင်၏အခန်းမည်မျှပူသို့မဟုတ်အအေးပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ခဏကြာနိုင်သည်။ ငါသည်သင်တို့အကြောင်းကိုမသိသောပေမယ့်အရမ်းနောက်ကျမယ့်သည်အထိအခန်းအပူချိန်သို့ပါဝင်ပစ္စည်းများယူလာစဉ်းစားပါ။
စိတ်မပူပါနှင့်၊ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းအချို့ကို အသုံးပြု၍ သင်ပါဝင်သောအရာများကိုလျင်မြန်စွာနွေးနိုင်သည်။
ထောပတ်ဟာမုန့်ဖုတ်ပစ္စည်းအများစုမှာအလွန်အသုံးများတဲ့ (နှင့်အရသာ) ပါဝင်ပစ္စည်းပါ။ သင်လုပ်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့်အခန်းအပူချိန်တွင်ရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်? ကောင်းပြီ၊ အအေးနဲ့ကျောက်တုံးကဲ့သို့ခဲယဉ်းသည့်အချိန်တွင်ထောပတ်ကိုမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုပေါင်းစပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
နို့မှုန့်ဟာ emulsions အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖို့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အသုံးအများဆုံးရေနံပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာအသုံးအများဆုံးအချို့ရှိပါသည်။
ကြက်ဥလူဖြူနှင့်သကြားအမှုန့်များနှင့်အတူထောပတ်ရိုက် လွယ်ကူသော buttercream
သငျသညျရှေ့ဆက်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ထောပတ်ရေခဲသေတ္တာထဲကယူ။ သူကအခန်းအပူချိန်သို့ရောက်ခွင့်ပြုပါရန်နေ့လည်ခင်းပေါ်မှာထားခဲ့နိုင်သည်။
သင့်အအေးထောပတ်ကို Cube များသို့လည်းဖြတ်နိုင်ပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်ထားနိုင်သည်။ မိနစ် ၃၀ ခန့်တွင်သူ့ဟာသူပျော့သွားလိမ့်မည်။ မြန်လား ဖန်ခွက်တစ်လုံးကို ၅ မိနစ်ခန့်ရေအေးဖြင့်ဖြည့်ပါ၊ ထို့နောက်ရေကိုစစ်။ ပန်းကန်လုံးခန်းခြောက်ပါ။ ပန်းကန်လုံးကိုထောပတ်ပေါ်တွင်တင်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခန်းအပူချိန်ရှိလိမ့်မည်။
အချိန်တိုပြီးပျင်းရိသလား (အဲဒါကျွန်တော်ပါပဲ)။ စက္ကူကိုရစ်ပတ်နေတုန်းငါထောပတ်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ငါပေါင် ၁ ပေါင်လုပ်ကွက်ကြီးမှာငါ့ရဲ့ထောပတ်ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့စက္ကန့် ၃၀ နဲ့စပြီးတော့ထောပတ်ကိုလှည့်ပြီးငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကို ၅၀% အထိလျှော့ချပြီးပျော့သွားတဲ့အထိ ၁၀ စက္ကန့်လောက်ထပ်ပြီးအပူပေးတယ်။
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖို၌ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူအပူပေးပြီးသင်၏ထောပတ်ကိုအရည်ပျော်စေနိုင်သည်။ အရည်ပျော်သောထောပတ်သည်အေးသောထောပတ်ကဲ့သို့သောပြproblemsနာများရှိပြီးအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာမပေါင်းသင်းသောကြောင့်သတိထားပါ။
ဟုတ်တယ် .. ငါ့ကိုပဲချောင်းဆိုး
ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မုန့်ဒိန်ခဲကိုအခန်းအပူချိန်သို့ယူဆောင်လာလိုပါက Cube ထဲသို့ခုတ်ဖြတ်ပြီးအပူပေးနေစဉ်အတွင်းပူနွေးသောပန်းကန်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မီးဖိုပေါ်တွင်တင်ပါ။ နွေးရန် ၁၅ မိနစ်သာကြာသည်။
ကြက်ဥအအေးသည် buttercream (သို့) ကိတ်မုန့်ကိုလျင်မြန်စွာပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သငျသညျပျော့ပျောင်းထောပတ်သို့အအေးကြက်ဥထည့်သောအခါ, သူတို့ကထောပတ်တုံးထဲမှာခိုင်မာစေခြင်းနှင့်သင့် emulsion ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အအေးကြက်ဥတွေကလည်းကောင်းကောင်းမထနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဟာလေကိုစားဖို့ဒါမှမဟုတ်လေအများကြီးထောင်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်သင့်ဥတွေကိုအခန်းအပူချိန်ကို ဦး စွာယူဆောင်လာပါ။
ရှလကာရည်နှင့်အတူ Raspberry ဆေးကြောဖို့ဘယ်လို
အခွံထဲရှိဥများကို ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိနွေးသောရေအိုးထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ အများအားဖြင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါစာရွက်အဘို့အကြှနျုပျ၏အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများထွက်စကေးငါ့ကိုကြာသကဲ့သို့
ဒီတစ်ခုကစူပါရိုးရှင်းတယ်။ ငါဖန်ခွက်တိုင်းတာခြင်းခွက်ထဲမှာတိုင်းတာပြီးနောက်ငါကမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပဲ။ အများအားဖြင့်စက္ကန့် ၃၀ သည် ၈ အောင်စနို့ရည်ကျနိုင်သည်။ သင့်တွင်စွမ်းအားမြင့်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ရှိပါကအချိန်နည်းနည်းသွားပါသို့မဟုတ်ပါဝါကိုလျှော့ချပါ။
ချဉ်သောမုန့်၊ mayonnaise နှင့်သစ်သီးအခွံများကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ
သင်အချိန်တိုတောင်းလျှင်သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုတိုင်းတာ။ နွေးနေသောပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ပါ (၅ မိနစ်ခန့်ရေပူဖြင့်ပူပါ။ ထို့နောက်ခြောက်သွေ့ပါ) ။
ganache, အသစ်စက်စက်ထောပတ်နှင့် custard တူသောပူပါဝင်ပစ္စည်းများကော?
တစ်ခါတစ်ရံအခန်းအပူချိန်ဆိုသည်မှာနွေးမည့်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအေးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့၌တည်၏ ချောကလက်ကိတ်မုန့်စာရွက် , သင်ကကိုကိုးအမှုန့်ကိုရေပွက်ပွက်ဆူနေသောထည့်သွင်းပြီးတော့အေးစေပါ။ ဤသည်အအေးမိရန်နှောင့်အယှက်တစ်ခုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူနိုင်ပါတယ်။ အတူတူပါပဲ ချောကလက် ganache သင်တစ် ဦး နှင်းခဲအဖြစ်အသုံးပြုချင်လျှင်။
ပူသောအရောအနှောများကိုအအေးခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာသူတို့ကိုကြီးမားသောအအေးခန်းထဲသို့သွန်းလောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ငါကိတ်မုန့်အိုးကြီးတွေသုံးချင်တယ်။ ၎င်းသည်အရောအနှောကိုပျံ့နှံ့စေသဖြင့်လေထု၏မျက်နှာပြင်moreရိယာပိုမိုများပြားလာပြီးအပူကိုလျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့စေသည်။
ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing သွင်းနည်း